The Role of Weak Institutions in Underdevelopment – Zimbabwe
Read also Modernization and Dependency Theories on Global Inequality
Read also Lending Institutions, Health Care, and Human Capital
According to Mujuru (2015), Zimbabwe Human Rights Commission has not been able to address the human rights situation in the country due to lack of resources. The national government is unwilling to implement the key agreed reforms to allow transformation of the Human Rights institutions. The government of Zimbabwe should work very hard to support its Human Rights institutions in order to improve its human rights environment. In order to improve their policing, Human Rights institutions in Zimbabwe should make necessary transformations to their systems and to promote accountability. Furthermore, Human Rights institutions should strive to conform to International human rights standards in the manner they are handling citizens. This way, they will raise the living standards of the people of Zimbabwe who will work hard to improve economic development (David, Tafadzwa and Collen, 2012).